ဗိုက်ချပ် Sixpack | Home
Home› Life› Fitness› ဗိုက်ချပ် Sixpack› ဗိုက်ချပ် Sixpack
ကျစ်လျစ်ချပ်ရပ်နေတဲ့ ၀မ်းဗိုက်သားတစ်ခု ရရှိဖို့၊ Gym ကစားသူတိုင်းရချင်တဲ့ Sixpack ရဖို့အတွက် Gym သွားစရာမလို မိမိအိမ်မှာပဲ အလွယ်တကူ လိုက်လုပ်နိုင်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၀မ်းဗိုက်တစ်ခုလုံးအတွက် ထိရောက်သည့် ကစားနည်းဖြစ်သည်။ ပက်လက်အိပ်အနေအထားအဖြစ် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဦးခေါင်းကို ကြွထားပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို တင်ပါးဘေးတွင် ထားရှိကာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်လျက်မြှောက်တင်ရမည်။ အကြိမ် ၁၀ မှ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်အထိ မြှောက်တင်နိုင်ပြီး တစ်ခါကစားလျှင် ၃ ကျော့ခန့်မျှ ကစားရမည်ဖြစ်သည်။
2. Lying twist or wipes
၀မ်းဗိုက်ဘေးသားအတွက် အဓိက ထိရောက်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။ အိပ်လျက်အနေအထားဖြင့် လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးသို့ ကား ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကို ထောင်ကာ ဘေးဖက်သို့ တစ်ဝက်စီဖြေးညှင်းစွာ ချရမည်ဖြစ်သည်။ ဒူးခေါင်းအနည်းငယ် ကွေးထားရမည်။
3. Cross body knee
၀မ်းဗိုက်အောက်ဖက်နှင့် ဘေးဖက်အတွက် ထိရောက်သော ကစားနည်းဖြစ်သည်။ ဒိုက်ထိုးသည့်ပုံစံအနေအထားဖြင့် ညာဒူးခေါင်းအားဘယ်ဘက်တံတောင်ဆစ်သို့ တွန်းတက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်၊ ညာတစ်လှည့်စီ လုပ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အကြိမ် ၁၀ မှ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
4. Dumbbell Woodchopper
၀မ်းဗိုက်ဘေးသားတစ်ခုလုံးအတွက် ထိရောက်သော လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။ မတ်တပ်ရပ် အနေအထားဖြင့် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အလေးတုံးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ပုဆိန်ဖြင့် သစ်ခုတ်သည့်ပုံစံမျိုး ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်လျှင် ၁၀ မှ ၃၀ ကြိမ်ခန့် ဘယ်ညာတစ်လှည့်စီ ပြုလုပ်ရ မည်ဖြစ်သည်။
5. Two dumbbell windmill
၀မ်းဗိုက်တစ်ခုလုံးအတွက် ထိရောက်သော ကစားနည်းဖြစ်သည်။ မတ်တပ်ရပ်အနေအထားဖြင့် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ဘေးသို့ပုံပါအတိုင်း စောင်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးလျှင် လက်တစ်ဖက်ကို ထောင်လျက်ထားရှိကာ ကျန်တစ်ဖက်ကို ခါးကိုညွှတ်လျက် အောက်ဖက်သို့ နှိမ့်ဆင်းရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်လျှင် ၁၅ ကြိမ် ခန့် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
6. Side bend(Dumbbell)
၀မ်းဗိုက်ဘေးသားများအတွက် ထိရောက်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။ Dumbbell ကိုင်ကာ မတ်တပ်ရပ်အနေအထားဖြင့် တစ်ဖက်ချင်းစီသို့ စောင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်ညာတစ်လှည့်စီ အကြိမ် ၃၀မှ ၄၀ခန့်မျှ စောင်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။
၀မ်းဗိုက်တစ်ခုလုံးအတွက် ထိရောက်သော စကားနည်းဖြစ်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို နားရွက် နောက်ဘက်တွင်ထိလျက် ဘယ်လက်ဖြင့် ညာဒူး၊ ညာလက်ဖြင့် ဘယ်ဒူးကို တစ်လှည့်စီ ထိပေးရမည် ဖြစ်သည်။ ဘယ်ညာ တစ်လှည့်စီ အကြိမ် ၃၀ မှ ၄၀ ခန့် ပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Gym Instructor - Ye Htet(The Fit Gym)